युएईको रोयल गार्डमा नेपालीलाइ अबसर यति धेरै हुन्छ तलब कसरी जान सकिन्छ ? के के छन् मापदण्ड ? हेर्नुहोस – Khabar28media
युएईको रोयल गार्डमा नेपालीलाइ अबसर यति धेरै हुन्छ तलब कसरी जान सकिन्छ ? के के छन् मापदण्ड ? हेर्नुहोस
August 11, 2021 August 13, 2021 - by admin - LeaveaComment
काठमाडौं साउन: युएई पुग्ने वा युएई पुगेका जो कोहिको एउटा सपना भनेको दुबईको रोयल गार्डमा काम गर्न पाउनु एक हो । आकर्षक तलब , राम्रो सुबिधा र सहज कामको कारण दुबईमा रहने वा दुबई जाने जो कोहिको लागि रोयल गार्डमा काम गर्ने सपना रहेको हुन्छ ।
युएईको लागि रोयल गार्डमा काम गर्न इच्छुक ब्यक्तिहरुले विभिन्न समयमा आउने माग पत्र अनुसार नेपालको मेनपावर कम्पनी मार्फत अन्तर्वार्ता दिनु पर्ने हुन्छ
त्यस्तो अन्तर्वार्ताको लागि युएईबाट नै सेलेक्सनको लागि प्रतिनिधि आउने गर्छन् भने युएईमा नै रहेका ब्यक्तिहरुले युएईमा रहेका एजेन्सीहरु मार्फत अप्लाइ गर्नु पर्ने हुन्छ ।
उचाइ ५.७ इन्च अंग्रेजी दक्षता राम्रो भएको
चयन प्रक्रिया रोयल गार्डको चयन प्रक्रिया तीन किसिमले गरिन्छ ।
तलब कति हुन्छ ?
तलबको कुरा गर्ने हो भने नेपाली जन्डै १ लाख रुपैयाँ सम्म हुन्छ
पहिलो त शारीरिक परिक्षण, चिकित्सा परिक्षण जसमा तपाइको कुनै दृघरोगको परिक्षण गरिन्छ र अन्तिम अन्तर्वार्ता लिइन्छ । नोट : यी जानकारीहरु रोयल गार्डमा काम गरेका र विभिन्न स्रोतबाट लिइएको हो । समयानुकूल विभिन्न कुराहरु परिवर्तन समेत भएको हुन सक्छ त्यसैले सम्बन्धित निकायको जानकारी नै अन्तिम हुनेछन् ।
Previous Article लाइसेन्स निकाल्ने तयारीमा हुनेहरुको लागि आयो सोच्दै नसोचेको खुसीको खबर।
Next Article एक हप्ता पछी बिनितालाई भेट्न जादा मकै बारीमा यस्तो अबस्थामा भेटिईन हेर्नुहोस् भिडियो